प्रहरीबाट बच्न भाग्ने क्रममा चोर २२ औं तल्लाको झ्यालमा झुण्डिए, उद्धार टोली बोलाएर यसरी निकालियो (भिडियो हेर्नुस्) – Light Nepal
Nepali News Portal.
प्रहरीबाट बच्न भाग्ने क्रममा चोर २२ औं तल्लाको झ्यालमा झुण्डिए, उद्धार टोली बोलाएर यसरी निकालियो (भिडियो हेर्नुस्)
कस्तो अचम्म? मुख्य समाचार
April 9, 2019 April 9, 2019 Srijana AcharyaLeaveaComment on प्रहरीबाट बच्न भाग्ने क्रममा चोर २२ औं तल्लाको झ्यालमा झुण्डिए, उद्धार टोली बोलाएर यसरी निकालियो (भिडियो हेर्नुस्)
एजेन्सी । चीनको हुनान प्रान्तमा प्रहरीले एक चोरलाई भाग्ने क्रममा पक्राउ गरेको भिडियो भाइरल भइरहेको छ। प्रहरीबाट बच्न भाग्ने क्रममा चोर एक भवनको २२ औं तल्लाको झ्यालमा झुयिडयो । प्रहरीको टोली उ बसेको ढोका विस्तारै खोलेर भित्र पस्छन् । हतियार सहित पसेका प्रहरीलाई देखेको चोर भाग्ने कोशिष गर्दा २२ तला माथिको झ्यालमा झुण्डिन्छ । प्रहरीका अनुसार भवनबाट तल झर्ने क्रममा २२ औं तल्लामा पुगेर उसले सन्तुलन गुमाएको थियो र एउटा झ्यालमा झुण्डियो। झ्यालमा झुण्डिएको दृष्य भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।
भागिरहेको चोरलाई बचाउन उल्टै उद्धार टोली बोलाउनु पर्ने अवस्था आयो। पछि उसलाई २२ औं तल्लाबाट उद्धार गरेर पक्राउ गरिएको थियो। सो युवकले २४ मार्चमा एक स्थानीय पसलमा चक्कु देखाएर लुटपाट गरेको आरोप लागेको थियो। प्रहरीले उक्त युवकले लुटेको सबै सामान बरामद गरिसकेको छ।
लुटपाटपछि युवक जियाङमा रहेको भवनमा लुकिरहेको थाहा पाएपछि प्रहरी उसको खोजीमा उक्त भवन पुगेको थियो। प्रहरी उसको अपार्टमेन्टमा प्रवेश गरेपछि युवक लिफ्ट र भर्याङबाट नभइ भवन बाहिरको झ्याल हुँदै भाग्न थालेको थियो। सो व्यक्ति २००३ र २०१७ मा समेत चोरीको आरोपमा पक्राउ परी जेल सजाय भोगेर बाहिर आएको प्रहरीले बताएको छ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाद्धारा चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा, वैशाख ६ गतेदेखि प्रधानमन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रम बिथोल्ने
माधवकुमार नेपाल अस्पताल भर्ना
March 21, 2019 Light Nepal
यमनले हानेको मिसाइल साउदीले खसाल्यो
November 5, 2017 लाइट नेपाल
तेह्रथुममा बस दुर्घटना हुँदा ५ जनाको मृत्यु, २३ भन्दा बढी यात्रु घाइते
December 11, 2016 maheswar